Ispoortii Addunyaa: Suuraalee torbee kana jaalataman 10 - BBC News Afaan Oromoo
Ispoortii Addunyaa: Suuraalee torbee kana jaalataman 10
Suurota Ispoortii torbee kan addunyaarratti kaafaman keessaa adda ta'uun filataman
Goodayyaa suuraa Wichiitaa, Amerikaa, Sadaasa 17: Garee kubbaa kaachoo Kolleejjii Michigaan wayita galchii abbaa qabxii 3 Joordaan Puule'n galcheen morkattoota isaanii galchii 64-63 injifatan miira gammachuu ture mul'isa.
Goodayyaa suuraa Piyoongichaan Kooriyaa Kibbaa, Sadaasa 18: Sangantaa cufiinsa Olompiikaa Gannaa Kooriyaa Kibbaa Istaadiyoomii Piyoongichaangitti, suuraa wayita Faajjii baattotni biyyoota addunyaa faajjii biyya isaanii qabatanii deeman.
Goodayyaa suuraa Anistaad Noorwaay, Sadaasa 11: Lammiin biyya Indiyaa Leelaa Kirishnaan Geengoo Arkitik keessatti shaakala cabbiirra sigaagaachuu erga xumuree booda wayita cabbii dinqisiifatu.
Goodayyaa suuraa Leesester, Inglaand Sadaasa 18: Peedroon tapha Cheelsii waliin taphatan irratti erga goolii galcheen booda gammachuusaa faajjii Koornaa dhiituun wayita ibsu.
Goodayyaa suuraa Areesh Bufoor, Fraans Sadaasa 14: Dorgommii Tuur de fraans cabbiirra sigigaachuu Piyeera Mentaa naannoo bufoor.
Goodayyaa suuraa Yunaatid Isteets, Kaalifoorniyaa, Sadaasa 18: Hu'aan Maartiin del Potroo Rogeer Federeriin yoo injifatu.
Goodayyaa suuraa Yunaaytid Arab Emireet, Dubaay Sadaasa 16: Namoonni lama waldhaansoo tapha aadaa paakistaan irratti yoo hirmaatan suura agarsiisu. Taphni kun Dangal ykn Kushtii jedhamuun beekama.Taphni kun tapha daqiiqaa 15 ti.
Goodayyaa suuraa Jaapaan, Fijii Sadaasa 15: Waldorgommii cillimfoo lixuu addunyaa kan meetira 10 irraa suura fudhatame.
Goodayyaa suuraa Cheltenhaam Ingilaand Sadaasa 16: Dorgommii guluffii Fardeenii namoonni 262,637 ta'an daawwatanirraa suura fudhatame.
Goodayyaa suuraa Dubaay Yunaaytiid Arab Emireet Sadaasa 16: Hasan Hamaada utaalcha dheeraa waldorgommii dubaayitti qophaayerratti wayita utaalu suura fudhatame.